Heshiiskii DPWorld 1/3/2017 la gashay JSL Waxaa ka soo wareegtay sanad ee maxaa ka qabsoomay ? qalikii A/rahman fidhinle | Baligubadlemedia.com
Heshiiskii DPWorld 1/3/2017 la gashay JSL Waxaa ka soo wareegtay sanad ee maxaa ka qabsoomay ? qalikii A/rahman fidhinle
eshiiska DPWorld iyo Somaliland wadagaleen taariikhdii 9/5/20016 ayaa laysku wada raacay in uu ahaa heshiis lagu deg-degay oo xaqul qalin yar la siistay. Heshiiskaas oo lagu heshiiyey in Shirkada DPWorld Dekeda Berbera ku maalgeliso lacag dhan $430 million dollar mudo 30 sanadood ah iyada oo ka fuudhyeelaysa dhismaha wadada Berbera Corridor ee isku xidhi doonta Wajaale iyo Berbera. Heshiiskaa ayaa hada qarka u saran in uu burburo maadaama ay shirkada DPWorld ay diidan tahay in ay dhamaan tunka uridato dhaqaalaha ku bixi doona dhismaha wadada Berbera corridor oo lagu qiyaasay lacag dhan $240 million.